Vavao tambatra | NewsMada
Tsara natomboka tamin’ny volana oktobra teo sy amin’izao novambra izao ny fambolena katsaka, hiadiana amin’ny firongatry ny bibikely (chenilles légionnaires) manimba azy raha iandrasana fiandohan’ny taona. Ho fiarovana ny voly katsaka sy karazam-boly hafa, mahita ireo mpamboly any amin’ny distrikan’i Mandoto fa maivana ny fisehony amin’izao vanim-potoana izao ka tsy tiany ny renikatsaka tonga amin’ny volana janoary, araka ny fanadihadian’ny minisiteran’ny Fambolena. Ho fisorohana ny fandaniana be loatra amin’ny fitsaboana ny voly ny fanombohana izany amin’izao fotoana izao. Tsy tsara raha andrasana fiandohan’ny taona ny fambolena katsaka.
Mandeha ny asa fanamboaran-dalana Ambilobe-Vohémar, mirefy 180 km. Nilaza ny minisitry ny Asa vaventy, Andriantiana Ulrich, fa tsy vita ao anatin’ny fotoana fohy io asa nomena ny orinasa sinoa io. Hita any an-toerana, ankehitriny, ny fanotofana tany efa tonga eo Betsiaka, araka ny fanaraha-maso ataon’ny minisiteran’ny Asa vaventy. Koa manantena ny mponina any amin’iny faritra iny fa na iza na iza ho mpitondra vaovao eo, hitohy hatrany izany asa fanamboaran-dalana efa nandrasana taona maro izany.
Araka ny hita ao amin’ny tetibolam-panjakana 2019, misy 199,4 miliara ariary ny fandraisana anjaran’ny fanjakana sy ny mpamatsy vola iraisam-pirenena amin’ireo orinasam-panjakana. 81,5 miliara ariary amin’izany ny fatiantoka hiantohan’ny Banky foiben’i Madagasikara. Miisa 51 ireo orinasam-panjakana manana sata Epic (Etablissements publics à caractère industriel et commercial). Ohatra vitsivitsy amin’ireo ny ACM, ny APMF, ny BCMM, ny INTH, ny Inscae, ny FTM ….